मधेश बन्दसंगै खाद्यान्न व्यवस्थापन
लहान २३ असोज । लामो मधेश आन्दोलनले मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समस्या भएकोले यसको मध्यनजर गरी राहतको व्यवस्थापन गरेको छ । खाद्यान्न संकलन तथा वितरण अभियान समिति
सभासद् रामचन्द्रका छोरा बद्रीलाई मार्ने योजना गरिरहेका एमालेका रामऔतारलाई मधेशवादीले कुट्दै लखेट्दै
लहान २० असोज । सिरहा क्षेत्र नं. ४ का सभासद् रामचन्द्र यादवका छोरा बद्री यादवलाई मार्ने योजना बनाइरहेका एमालेका सिरहा जिल्ला कमिटी सदस्य रामऔतार यादवलगायत दर्जनौलाई
?मधेश आन्दोलनको बटमलाइन चाहिँ सीमांकन नै हो?
लहान, २० असोज । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै आएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेश आन्दोलनको बटमलाइनचाहिँ सीमांकन नै हो । त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि
कोइराला, ओली र प्रचण्डलाई संकेत गरी लहानमा गद्दा जुलुस, एमालेलाई कुट्दै धपाउंदै
लहान, १७ असोज । जारी मधेश आन्दोलनको ५० औं दिन आज लहानमा गाद्दा जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला, एमाले अध्यक्ष
भारतले नाकाबन्दी नलगाएपछि खोलिने कुरा कहांबाट आयो ? नाकाबन्दी यथावतै
लहान, १६ असोज । भारतले नाकाबन्दी स्वीकार गर्दै नगरेपछि खुलाउंने निर्देशन समेत नदिएको दिल्ली स्थित मधेशी आन्दोलनकारीले नवसंग्रामडटकमलाई जानकारी दिएका छन् । मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलगायत
संविधानको प्रस्तावना नै गलत रहेको जेपीको दावी
लहान, १४ असोज । प्रमुख तीन दलले जारी गरेको संविधानको प्रस्तावना नै गलत रहेकोले मधेशी, जनजाती, मुस्लिम, दलित, महिलाले यो संविधान अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा रहनुपरेको लहानको
सुशिल,ओली र प्रचण्डको संकेत गरी लहानमा कुकुर जुलुस
लहान १२ असोज । मधेश आन्दोलनको ४६ औं दिनसम्म पनि आन्दोलन जारी रहेको छ । आन्दोलनको क्रममा लहानमा आज कुकुर जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेस
आन्दोलनकारी अब हाईवेमै सुत्ने, सिरहामा बम विस्फोट
लहान, ८ असोज। मधेश आन्दोलन संघर्ष समिति र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सिरहाको सडक अबरुद्ध गर्नको लागि सडकमा खाने बस्ने तथा त्यही सुत्ने भनी कडा आन्दोलनको तयारी
एमाओवादीबाट मधेशवादी अलग हुंदै, मधेशमा नयां पार्टीको तयारी
लहान, ३१ भाद्र । एमाओवादीका मधेश केन्द्रीत शक्तिहरु मध्ये रामकुमार शर्मा र राजरिझन यादवले पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि आन्तरिक तरंग पैदा भएको छ । एमाओवादीका मधेश शक्तिका
मधेशी मोर्चा र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा गठबन्धनद्वारा आमहडतालदेखि संविधान जलाउने सम्मको कार्यक्रम
शुभ नारायण यादव सप्तरी, ३१ भाद्र । संघीय गठबन्धन नेपालले देशव्यापीरुपमा संविधान जलाउने घोषणा गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा
३३ दिन पनि प्रर्दशन र बजार ठप्प
सिरहा,३१ भाद्र । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अह्वान गरेको बन्दको विहीवार ३३ औं दिन सिरहामा प्रर्दशन भएको छ । सिरहाको सिमावर्ती माडर बजारमा स्थानीय नागरीक अगुवाहरुको नेतृत्वमा
छयासठ्ठी किलोको लड्डु बनाई गणेश पूजा
सुरेन्द्रकुमार कामति सिरहा, ३१ भाद्र । सिरहाका स्थानीय युवाहरुले छयासठ्ठी किलोको लड्डु सहित विहीबार गणेश पूजाको प्रारम्भ गरेका छन् । सदरमुकाम सिरहाका ऐतिहासिक लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरमा गणेश चतुर्दशीको
कटुवा पेस्तोलसहित नुर र दामोदर गिरफ्तार
लहान,२९ भाद्र । मधेशमा भूमिगत संगठनहरु वार्तामा रहेको बेला अपराधी गिरोहका दूई जनालाई सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा ठाडीले हतियारसहित पक्राउ गरेको छ । आज (मंगलवार) विहान
हामी पनि तराईमधेश आन्दोलनको हिस्सा हौ !
रामरिझन यादव विगत एक महिनाभन्दा वढी समयदेखि तराईमधेशमा जारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म ३० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सैयौ घाइते भएका छन् । कैयांैलाई पूर्ण रुपमा उपचार हुने
विराटनगरमा विशाल प्रदर्शन
विराटनगर, २७ भाद्र । मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलगायतको संयुक्त मोर्चाले आइतबार बिराटनगरमा वृहत शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । आजको प्रदर्शनमा मुस्लिमआबद्ध संगठनको अगुवा रहेको तमरा अभियानका
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी बल बढ्दो
लहान, २७ भाद्र । ‘लहानमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग धेरै नै भयो ’ पूर्व मन्त्री राजलाल यादवले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताउंनुभयो । पूर्व मन्त्री
मधेशी जनताको माग विपरित संविधानसभामा मतदान नगर्न आग्रह
सिरहा, २६ भाद्र । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष विजयकुमार यादवले सिरहा जिल्लाका सवै सभासदलाई जनताको माग विपरितको संविधानमा मतदान र हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गर्नुभएको
लहानमा गोली प्रहार, ढेड दर्जन घाईते
लहान , २३ भाद्र । मधेश आन्दोलनको विजारोपण भएको लहान आज आन्दोलनको २६ औं दिनमा तनाव बढेको छ । आन्दोलनकारीले बाटो अबरोध गर्ने क्रममा प्रहरीले दर्जनौ
मधेशमा ?जुलमी शासन?ले सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्छ
लहान , १८ भाद्र । काठमाण्डौंको शासन अब मधेशमा चल्दैन, स्वंम मधेशीले शासन गर्न तयार रहेकोले नेपाल सरकारसंग वार्ताको औचित्य नरहेको तमलोपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर
हरेक पुरुषले एक एक महिला कब्जा गरेकोले पतिपत्नि मिलेर आन्दोलनमा आउंन ललिताकी आव्हान
लहान, १६ भाद्र । मधेश र मधेशीसंग गरिएको सम्झौता लागु गरियो भने हाम्रो वार्ता पूरा हुने बताउंदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै वार्ता गरिसकेपछि अर्को वार्ता किन गर्ने
अभि नही तो कभी नही, लहान उद्योग वाणिज्य संघ पनि आन्दोलनमा
लहान, ७ भाद्र । केही दिनअघि आन्दोलन विपरितका मनसुआ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ लहानले आजदेखि आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन दिंदै मधेशको अस्मिता बचाउंन जागृत भएका छन् ।
थरुहटका सभासद् संविधानसभा छोड्दै, आन्दोलनमा होमिने
लहान, ७ भाद्र । ‘अभि नही तो कभि नही’ पश्चिम तराईमधेश तथा थरुहट तराई पार्टी नेपालले संविधानसभा बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ । थारुहरुको मागलाई सम्बोधन
मिर्चैयामा गोली चलियो, दूई दर्जनबढी घाईते
लहान ७ भाद्र । मधेशी , थारु, मुस्लिम, दलितलगायतको जारी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सिरहाको मिर्चैयामा प्रहरीले गोली चलाइएको छ । सोमबार विहान ३ बजेर ३० मिनेटतीर सिरहाको
मधेशको अस्मिता जोगाउंन सभासद्हरु काठमाण्डौं छोड्दै सभासद् पद्मनारायण चौधरीले आन्दोलनकारीलाई फोन गरे
लहान, ७ भाद्र । मधेशी, थारु, मुस्लिम र दलित सभासद्हरु काठमाण्डौं छोडेर तराई मधेश संरक्षणको लागि मातृभूमी फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ । सप्तरी क्षेत्र १
मधेशमा गृहमन्त्री राजीनामाको माग, सिरहामा तोडफोड
लहान, ५ भाद्र । अखण्ड मधेश कायम गर, विगतको सम्झौता कार्यन्वयन गर र हत्यारा गृहमन्त्री राजीनामा दें जस्ता नारा लगाउंदै मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितहरुले आज लहान
खस पहाडीहरु मधेश छाड्ने तयारीमा, दूई मधेशीको हत्या र मधेश आन्दोलन उचाईमा
लहान,२ भाद्र । मधेशी र मधेशवादी दल ,माओवादी, थारुलगायत विभिन्न दलहरुले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा सप्तरीमा दूई जनाको मृत्यू भएको छ । प्रहरीको गोली लागेर सहादत्त
विभेद अन्त्य नै मधेशी मुक्तिको आधार, मातृकाले गरे सहिद रमेशप्रति श्रद्धाञ्जली
लहान , २१ साउन । ‘मधेश आन्दोलनमा म विवादित मान्छे’ ‘सहिद रमेशका आमाबुबा र दाजुलाई जानकारी होला ’ ‘उहांहरुको इच्छा अनुसार सहिद रमेशको लागि व्यावस्थापन गरेको
एमाओवादीका मधेशी नेताहरुद्धारा मधेशमैत्री संविधान बनाउंन माग
लहान,१६ साउन । मधेशमैत्री संविधान निर्माणमा जोड दिंदै एमाओवादीका मधेशी नेताहरुले आज केही अत्तिआवश्यक विषयहरु मगको रुपमा राजनीतिक संम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा.बाबुराम भटट्राईमार्फत संविधानसभा
मधेशमा प्रहरी प्रशासन अनियन्त्रित ः मोहना
लहान, १० साउन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथी सुझाव संकलनको विरोध मधेशीहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा प्रहरी दमनमा सयौं घाईते भएको छ । यसमा जनकपुर, गौर, विरगंज, लहान,
सुरक्षा व्यावस्थाका साथै गोलबजार प्रहरी सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय
लहान ९ साउन । नागरिक हात्तेमालो कार्यक्रम अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय, गोलबजारको आयोजनामा एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शनिवार गोलबजारमा सम्पन्न भएको छ । सो स्वास्थ्य
मधेशमा सुरक्षा घेराबीच मस्यौदा सुझाव संकलन, ठाउंठाउंमा तनाव र सिकेका कार्यकर्ता समावेश
लहान, ४ साउन । मधेशमा सुरक्षा घेराबीच मस्यौदामा सुझाव संकलन भइरहेको छ । मधेश विरोधी संविधान चाहिदैन् भन्दै मधेशको जिल्ला जिल्लामा मधेशवादी दलहरुले विरोधमा उत्रिएको छ
प्रचण्डको क्षेत्रमा विपक्षी दलले मस्यौदा च्याँतियो
रामनारायण पंडित, मिर्चैया, ०२ साउन । सिरहाका मिर्चैयामा शनिबार (आज) आयोजित सार्वपक्षीय कार्यक्रममा विपक्षी दलहरुले मस्यौदा च्याँतिएर विरोध गरेका छन् । साउन ४ र ५ गते हुने
मिर्चैयालाई हरित नगर बनाउंन तयारी, स्मृति वाटिकामा सौन्दर्यता थपौं
राम नारायण पंडित मिर्चैया, २ साउन । सिरहाको मिर्चैैया नगरपालिकालाई हरित नगर बनाउंन स्थानीयहरुबासी छलफलमा जुट्न थालेको छ । मिर्चैया स्थित रहेको स्मृति वाटिकालाई ग्रिन पार्कको रुपमा
सिरहामा बसदेखि तांगा व्यावसायी समेत आन्दोलित
सरोज पासमान सिरहा २ साउन । सिरहा नगरपालिकाले एकल निर्णय गरि बस व्यवसायी, म्याजिक व्यवसायी र तंगा व्यवसायी संघ संग पैसा संकलन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै शुक्रवार
लहानमा सार्वजनिक सुनवाई, सडक विजुलीवत्तीको गुनासो
लहान १ साउन । लहान नगरपालिकामा थपिएका गाविसहरुमा विजुली वती, सडक निर्माण, चर्पी निर्माण, भूक्षय, शिक्षा, स्वास्थ्य, समूहगत व्यावसाय लगायतको विषयमा आज (असार ३१ ) लहानमा
Date : 29 Jun 2015
सिरहामा महिला प्रहरीप्रति ३० प्रतिशत विश्वास
दिनेश्वर गुप्ता । लहान, १४ असार । लैंगिक हिंसा तथा शोषणबाट प्रभावित एवं पीडित महिला तथा बालबालिकालाई सामाजिक सहयोगका साथै कानुनी संरक्षण गर्दै तिनीहरुको असहायपनलाई न्यूनिकरण गर्ने
काठमाडौ असार १२ गते । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सविधानसभा सदस्य डा.अमरेशकुमार सिहले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो आफूले काठमाडौसँग सम्बन्ध तोड्ने बताएका छन्
हर्ट गार्डमा किरा,उपभोक्ता आक्रोशित
लहान, ९ असार । सिरहाको लहान स्थित रहेको फ्राइन्ड्स इन्टरनेशनल नेपालको उत्पादन हर्ट गार्ड नामक मिनिरल वाटरको बोतलमा किरा भेटिएको छ । लहानमा कम्पनी स्थापना गरी
लहानबाट सिके राउत गिरफ्तार, अमेरिकाको एजेन्ट भएको स्थानीयको आरोप
लहान, । मधेश स्वराजका सिके राउत आज लहानको हांस्पीटल चौकबाट गिरफ्तारमा परेका छन् । लहानको राधाकृष्ण लांजमा देश टुक्राउंनेवारे प्रवचन दिएर बाहिर निस्किने क्रममा ४ बजेर
Date : 23 Jun 2015
पहिलो मस्यौदा लगत्तै मधेशी दलहरु संविद्यानसभा छोडने तयारीमा
नविन झा । नयां संविद्यान निर्माणको पछिल्लो प्रक्रियामा तीव्र असन्तुष्टि जनाउदै आएका प्रमुख मधेशी पार्टीहरुले प्रमुख दलहरुको १६ बुंदेको आधारमा पहिलो मस्यौदा आए लगतै संविद्यानसभावाट राजिनामा दिने
Pages6: You are at page4of 6